ဒီတပတ် English American Style : Idioms ကဏ္ဍမှာ စာရွက်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Paper ကို အခြေခံတဲ့ Paper tiger, Paper trail နဲ့ Walking papers အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေ ကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Paper tiger
Paper (စက္ကူ၊ စာရွက်)၊ tiger (ကျား) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က စက္ကူကျား (တနည်း) စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကျား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဟာ တကယ်တော့ ရှေး တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ စက္ကူကျား လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Zhilaohu ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ဒီအသုံးကို တရုတ် ကွန်မြူနစ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး မော်စီတုံးက ၁၉၄၆ ခုနှစ်က အမေရိကန် သတင်းထောက် Anna Louise Strong နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ အမေရိကန် အရင်းရှင်စနစ်ဟာ ကြည့်ရတာ အင်အားကြီးပေမယ့် လက်တွေ့မှာ စက္ကူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကျားလိုပဲ ဘာမှ ကြောက်စရာ မကောင်းဘူးလို့ ဖြေကြားခဲ့ရာကနေ ခေတ်စားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံ အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ အာဏာရှိတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာတော့ အဆံမရှိတဲ့ သင်္ကြန်အမြောက်၊ အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေ အစရှိတဲ့ ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် သံတမန်ရေးရာမှာ နိုင်ငံတနိုင်ငံက တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တုံ့ပြန်ရာမှာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ တကယ်မတုံ့ပြန်ဘဲ အပြောကြီးသက်သက် ဖြစ်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကြောက်ဖို့မလိုတာကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Once when Chairman Mao criticized the Soviet Union for being friendly with the US, Soviet leader Khrushchev reportedly replied , "the paper tiger has nuclear teeth”.
တချိန်က ဥက္ကဋ္ဌကြီး မော် က အမေရိကန် နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့ ဆက်ဆံရေးနွေးထွေူးမှုကို ဝေဖန်ခဲ့ရာမှာ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင် Khrushchev က ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကကြောက်စရာ မကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ စက္ကူကျားမှာ နျူကလီးယား သွား ရှိတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
(၂) Paper trial
Paper (စက္ကူ၊ စာရွက်)၊ trail (နောက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်း) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နောက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ စက္ကူလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံ အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးအနေနဲ့ ကိစ္စတခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခြေရာခံလိုက်နိုင်ဖို့ကျန်ခဲ့တဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားတွေ ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ကိစ္စတခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးသားထားတာ၊ ထုတ်ပြန်ထားတာတွေဟာ စာရွက်စာတမ်းအပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာ ဘယ်လို ရေးသားထားတယ်။ ဘယ်လို ကတိပေးထားတယ်။ ဘယ်လို လက်မှတ်ရေးထိုးတားတယ် ဆိုတာကို စာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာ ပြနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာ ပြနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေဟာ Paper trial ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလို Internet ခေတ်ကြီးမှာ လူတဦးကို ခြေရာခံ လိုက်နိုင်ဖို့ အဲဒီလူ ရေးသားထားတာ တွေ့လို့ရှိရင် အထူးပဲ လွယ်ကူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
He leftapaper trail so it was easy to locate him.
သူရဲ့  စာရေးသားချက်တွေကို ခြေရာခံပြီးတော့ သူ ဘယ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ရှာတွေ့ဖို့က လွယ်ကူခဲ့တယ်။
(၃) Walking papers
Walking (လမ်းလျှောက်တာ)၊ papers (စက္ကူ၊ စာရွက်တွေ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လမ်းလျှောက်နေတဲ့ စာရွက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လမ်းလျှောက်တယ်လို့ဆိုရာမှာ လမ်းခွဲထွက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဆောင်တဲ့အတွက် အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလုပ်ဆိုလဲ အလုပ်က အထုတ်ခံရ၊ ရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့စာတမ်း၊ အိမ်ထောင်ဆိုရင်လဲ ကွာရှင်းတဲ့ စာရွက်စာတမ်း စသဖြင့်တို့ကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတော့ထွက်သွားလို့ရည်ညွှန်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The company’s business wasn’t doing well. So I wasn’t surprised when I got my walking papers.
ကုမ္ပဏီရဲ့  စီးပွားရေး အခြေအနေက သိပ်မဟန်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေရတော့လဲ ကျနော် သိပ်အံ့အားမသင့်ခဲ့ဘူး။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ Paper ကို အခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေက Paper tiger, Paper trail နဲ့ Walking papers တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။